प्रेमी पाउन गाह्रो भो-इन्दिरा जोशी…. – ईमेची डटकम
प्रेमी पाउन गाह्रो भो-इन्दिरा जोशी….
Posted byईमेची डेक्स September 27, 2019 October 30, 2019 Leaveacomment on प्रेमी पाउन गाह्रो भो-इन्दिरा जोशी….
अविवाहित सुन्दरीको रुपमा सुपरिचित गायिका इन्दिरा जोशीले प्रेम बिबाह गर्ने बताएपनि उनको मन र सांगीतिक क्षेत्र वुझिदिने कुनै पुरुष नआएको उनि बताउछिन् । उनका ३ जना दिदीको मागी बिबाह भयता पनि आफूले प्रेम बिबाह गर्ने सोच उनले राखेकी छिन् ।उनि भन्छिन ” यो क्षेत्र बुज्ने प्रेमी पाउँन गाह्रो छ ।”
उनलाई अग्लो केटा मनपर्ने बताउछिन् !
हैट इन्दिरा, हट इन्दिरा
गायिका इन्दिरा जोशी हिजोआज निकै चर्चामा छन् । युटुबमा इन्दिराका भिडियो राम्रै खोजिन्छन् । यसको पछाडि ‘नेपाल आइडल’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । ‘नेपाल आइडल’को निर्णायक भएपछि इन्दिरालाइ धेरैले पछ्याउन थालेका हुन् ।
केही गीतका कारण चर्चामा रहेकी इन्दिरालाइ धेरैले हट गायिकाको रुपमा चिन्छन् । स्टेज कार्यक्रममा दर्शकलाइ जुरुजुरु पार्न उनी सिपालु छिन् । उनै, इन्दिरा अहिले देशभरबाट आएका प्रतिभाहरुबाट उत्कृष्ट एक प्रतिभा छान्न लागिपरेकी छिन् ।
काठमाडौं सानो भएपनि यहाँ धरैथोक पाइन्छ : इन्दिरा जोशी
आजको नागरिक काष्ठमण्डपमा इन्दिरा जोशीसँगको कुराकानी प्रकाशित छ । कुराकानीको केही अंश:
नेपालभित्र मनपर्ने सहर ?
-मेरो सबैभन्दा प्यारो सहर पोखरा हो ।
नेपाल बाहिर कुन-कुन देशका सहर घुम्नुभएको छ ?
-मैले झण्डै ३० देशको सह घुमेको छु । अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, सिंगापुर, बेलायत, चीन, कोरिया, दुबई, कतार, इटली, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्सलगायत देश पुगेकी छु ।
ती देशमा मननपर्ने सहर ?
हाम्रो देशका सहर र विदेशी सहरबीच भिन्नता ?
-नेपालबाट बाहिरिनासाथ प्रदूषण धुलो देख्नुपर्दैन । तर, बाहिर छिरेर आफ्नो देश छिर्दा आफ्नो देशप्रति दया लाग्छ । जताततै फोहोर र प्रदूषण मात्रै देखिन्छ । नेपालको जस्तो हावापानी र हरियाली भने अन्तका सहरमा पाइदैन ।
उपत्यकाको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने पक्ष ?
-यो सानो ठाउा भए पनि यहाँ धरैथोक पाइन्छ । जस्तै खानेकुरा, घुम्ने र मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ, सबैखाले सरकारी सेवा सुविधा । यहाँको मौसम पनि राम्रो लाग्छ । यी कुरा सम्झँदा उपत्यका बस्न मन लाग्छ ।
यहाँका मननपर्ने पक्ष ?
-ट्राफिक जाम र प्रदूषण ।
-नेवारी खाजा मनपर्छ ।
Posted byईमेची डेक्स September 27, 2019 October 30, 2019 Posted inमनोरञ्जन
जामका कारण यात्रु यम्बुलेन्स भित्रै मृ*त्यु भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा लगायो कडा नियम